रोनाल्डो माथि लागेको बलात्कार आरोप ‘फर्जी कागजपत्र बनाएको’ खुलासा ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
रोनाल्डो माथि लागेको बलात्कार आरोप ‘फर्जी कागजपत्र बनाएको’ खुलासा !
आलोचनाको बाधमा अल्झेका विश्व फुटबलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो यतिबेला फेरी अर्को बलात्कार आरोपबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीमाथि अमेरिकी मोडल क्याथरिन म्योग्राले सन् २००९ मा अमेरिकामा लास भेगसस्थित एक होटलमा रोनाल्डोले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
तर, यो आरोपलाई रोनाल्डोले भने सुरुबाटै नकार्दै आएका छन् । र, उनले कानुनी लडाइँ लड्नेसमेत बताएका छन् ।
यसैबीच, रोनाल्डोका वकिलले भने यस घटनामा पीडित पक्ष भनिएकाले बलात्कार आरापेमा बनाएका सबै कागजपत्र झुटो रहेको दाबी गरेका छन् । वकिल पिटर क्रिस्टियान्सनका अनुसार रोनाल्डोले स्पष्ट रूपमा सबै आरोप नकारेका छन् ।
वकिलले यो दाबी गरेका छन् कि, बलात्कार आरोप लगाउँदै दर्ता गरिएका कागजपत्र झुटा हुन् । रोनाल्डोमाथि बलात्कार आरोप लगाइएको खबर पहिलोपटक जर्मनीको ‘डेर स्पिगल’ नाम पत्रिकाले छापेको थियो ।
रोनाल्डोका वकिलले उक्त सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम नगरी सहजै बदल्न सकिने कागजातलाई आधार मानेर गलत समाचार प्रकाशित छापेको दाबी गरेका छन् ।
खबरअनुसार सन् २००९ को घटनापछि म्योग्राले रोनाल्डोसँग घटना बाहिर नल्याउने सर्तमा करिब ४ लाख अमेरिकी डलर लिएर चुप बसेकी थिइन् । तर, उनले ९ वर्षपछि पुनः प्रहरीमा मुद्दा हालेकी हुन् ।
यता, रोनाल्डोले भने यसअअघि म्योग्रामाथि बलात्कार नभई समझदारीमा शारीरिक सम्बन्ध रहेको बताएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । रोनाल्डोले उक्त विषषमा पहिला नै समझदारी भएको र अहिले आए जसरी आफूले बलात्कार नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मेस्सी र रोनाल्डोको १० वर्षे साम्राज्यलाई तोड्दै क्राेएशियाली कप्तान लुका मोड्रिचले पाए बेलोन डी’ओर